Mihoatra ny 30 tapitrisa ny varotra Chromecast | Androidsis
Ny varotra totalin'ny Chromecast dia mihoatra ny singa 30 tapitrisa
Amin'ireo vokatra Google rehetra, Chromecast dia ilay nahita fahombiazana be indrindra tato anatin'ny taona vitsy lasa. Dongle izay ampiasaina handefasana ny atiny multimedia izay anananao amin'ny finday avo lenta na ny takelakao amin'ny fahitalavitra fahatanoranao ary namela ny maro hanalavitra ny fanovana ny televiziona ho an'ny fahitalavitra marani-tsaina mba hananana ny sasany amin'ireo mampiavaka ireo vokatra ireo.
Google dia nanambara ho ampahany amin'ny famoahana ny valim-bola telovolana novidian'ny orinasa ankehitriny singa maherin'ny 30 tapitrisa amin'ny fitaovana Chromecast anao amin'ny atiny fampahalalam-baovao mivantana. 10 volana mahery lasa izay rehefa nanavao ny fanolorana ireo karazana vokatra ireo miaraka amin'ny Chromecast 2 sy Chromecast Audio.
Ity firaketana vaovao ho an'ny orinasa ity dia nambaran'ny Sundar Pichai, CEO an'ny Google, nandritra ny fihaonamben'ny abidia miaraka amin'ny mpandalina vola. Tamin'ny volana Mey lasa teo, tao amin'ny kaonferansa Google I / O, dia nanambara fa nivarotra Chromecasts 25 tapitrisa izy, izay midika fa afaka nivarotra 5 tapitrisa fanampiny izy tao anatin'ny roa volana.
Misy vokatra roa anananao izao amidy ao amin'ny Google Store, Chromecast handefa sarimihetsika, Fandaharana amin'ny fahitalavitra, mozika sy karazana atiny rehetra amin'ny alàlan'ny telefaona mankany amin'ny fahitalavitra ary amin'ny Chromecast Audio, handefasana ny mozika tianao amin'ny telefaona mankany amin'ireo mpandahateny. Samy vidiny amin'ny € 39.
Mampihomehy fa amin'ireo andrana rehetra ireo amin'ny fitaovan'ny Nexus anao, tsy maintsy ho kely kokoa io, dongle, ilay iray izay afaka nanjary fahombiazan'ny varotra hatramin'ny nanombohany taona vitsivitsy lasa izay. Ary na dia efa misy aza ny safidy hafa noho ny tamin'ny nanombohany ny fanontana voalohany, dia afaka mivarotra singa marobe ao anatin'ny fotoana fohy satria ireo 5 tapitrisa ireo ao anatin'ny 2 volana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny varotra totalin'ny Chromecast dia mihoatra ny singa 30 tapitrisa
Google dia nanambara fanampim-panazavana ho an'ny fampiharana Docs sy Sheets